Microsoft Windows 8.1 ISO File – Direct Download Link | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
Microsoft Windows 8.1 ISO File – Direct Download Link
Posted on August 4, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)
Windows 8.1(Blue Windows) ကိုအသုံးပြုချင်သူတွေအတွက် Preview version လေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုချင်သူများအတွက် ကျွန်တော်ရှာဖွေပြီးပြန်လည်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ 32-bitကော 64-bitကောရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အနေဖြင့်ပြန်လည်တင်ပေးရမှာအခက်အခဲလေး
<<<<Direct Download Link>>>>
This entry was posted in Windows 8 နှင့်ဆိုင်သော. Bookmark the permalink.
← YouTube Video တွေကို Floating PopUp Player အနေနဲ့ ကြည့်နိုင်မယ့် YouTube Floating PopUp Player
သူတစ်ပါးအသုံးမပြုစေချင်သော Application များအား ပိတ်ထားခြင်း →